Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Smart Monday na IMEX America: Nzukọ Ndị Enyi ochie
IMEX America Smart Mọnde
"Nke a dị ka ụwa ọhụrụ maka ụlọ ọrụ anyị ma na-enye m olileanya na 2022 ga-abụ afọ siri ike." Onye na-azụ ahịa Valeria Serrano, sitere na ihe omume CTA na DMC dị na Mexico, chịkọtara ọ joyụ na obi ụtọ enwere na IMEX America tupu ụbọchị mmụta ihe ngosi, Smart Monday, nke MPI kwadoro. Ọ gara n'ihu ikwu, sị: “Ọ dị ka nnọkọ ndị enyi ochie. "Mụ na ndị enyi m ụlọ ọrụ na-emekọrịta ọzọ ma nwee ọtụtụ nzukọ ahazi n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ."
Ike nke ndị dị ndụ, n'ime mmadụ ahụmahụ na-ada ụda na doro anya na ọtụtụ.
Smart Monday, nke MPI kwadoro, nke emere na Mọnde, Nọvemba 8, bụ ụbọchị a raara onwe ya nye nke mmụta ihe ngosi tupu IMEX America.
Ụbọchị a malitere site na isi okwu nke Dr. Shimi Kang, onye dibia bekee nke Harvard zụrụ azụ, onye nyocha na ọkachamara na-ahụ maka akwara ozi.
Onye zụrụ Donna Rogers, onye si Solus Sustainable Hydration na California, kwetara, “Emejupụtala m kalenda onye isi m na nzukọ ihu na ihu na mmemme ịkparịta ụka n'Ịntanet!”
Ike nke ndụ, ahụmịhe mmadụ na-ada ụda na nke doro anya na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa Shelby Green, sitere na Enterprise Events Group na California, kọwara, “Obi dị m ụtọ ịhụ ndị mmadụ ọzọ - ma nwee obi ụtọ ịghara ịnọ na oku vidiyo ọzọ. !”
Ọgbakọ & mmemme bụ ndị na-ahụ maka ọdịmma mmadụ
Smart Monday, nke MPI kwadoro, nke emere na Mọnde Nọvemba 8, bụ ụbọchị raara onwe ya nye nke mmụta ihe ngosi tupu mgbe ahụ IMEX America nke na-aga site na echi ruo November 11 na Mandalay Bay, Las Vegas.
Ụbọchị a malitere site na isi okwu nke Dr. Shimi Kang, onye dibia bekee nke Harvard zụrụ azụ, onye nyocha na ọkachamara na-ahụ maka akwara ozi. Na nnọkọ ya, Na-agagharị n'eziokwu ndị na-emegide: 21st narị afọ nrụgide na ihe ọhụrụ, Shimi mere ka ọ pụta ìhè otú ndị ọkachamara ihe omume si aghọta njikọ dị n'etiti ahụmahụ ihu na ihu na ahụike uche na-ekwu: "Unu niile bụ ndị ọkachamara ahụike uche - ị maara na anyị chọrọ nzukọ, anyị chọrọ ọgbakọ, anyị chọrọ ozi. Ọ dị mkpa ịnweta nke a dịka akụkụ nke ahụmịhe mmadụ anyị - ọgbakọ na mmemme bụ ndị na-ahụ maka ọdịmma mmadụ. "
Ike nke okike iji kwalite ọdịmma na imeziwanye ahụmịhe mmemme bụ ihe a na-elekwasị anya na ọdịdị mbara igwe - Usoro gburugburu ebe obibi maka ịga nke ọma mmemme. Janet Sperstad, Onye isi ngalaba na Mahadum Madison, weputara imikpu miri emi n'ime akwụkwọ ọcha IMEX ya wepụtara na nso nso a "Nature of space". Ọ nyere ntụzịaka maka otu a ga-esi wepụta ahụmịhe mmemme dị ndụ nke "na-emenyụ akpịrị ịkpọ nkụ maka njikọ nkeonwe na obodo." Nchọpụta ya na-akọwapụta ụzọ nke imeghari nkuzi kachasị mma nke okike iji mepụta mmemme na-aga nke ọma, dị ka iji ọkụ, oghere, na njirimara gburugburu ebe obibi iji kpalie ihe ọhụrụ.
Oge ọkụ ọkụ - ike nke nkwado
Ihe gbasara gburugburu ebe obibi bụ n'ihu na etiti njem nlegharị anya nlegharị anya na MGM Resorts - bụ ihe pụrụ iche n'azụ ihe nkiri n'ime nnukwu mbọ nkwado Mandalay Bay. E webatara ndị sonyere n'usoro mbara igwe na-aga n'ihu na America nke na-anọdụ n'akụkụ usoro enyi na mbara ụwa ndị ọzọ dị ka mkpofu nri na nhazi ahịhịa na ọdụ ụgbọ mmiri 11 na-emegharịgharị n'ofe ebe ahụ. Ọrụ kacha mgbagwoju anya? Ịgbanwe ọkụ ọkụ ka ọ bụrụ LEDs na-arụ ọrụ nke ọma - ha niile 1.4 nde!
Njem nlegharị anya centric nke MGM bụ akụkụ nke mmemme njem nlegharị anya na-eme na Smart Monday, na-enye ohere iji jikọọ na mpụga ụlọ ngosi. Njegharị nri egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ na-ekerịta obere ala na Las Vegas yana ụfọdụ nri kacha mma na Strip, ebe njem Mystery kwere nkwa mgbede ịtụnanya nke ahụmịhe pụrụ iche, ọnọdụ dị mma, nri dị egwu na nnukwu ụlọ ọrụ.
Teknụzụ mmemme bụ nke ukwuu na ebumnuche maka ọtụtụ ndị na-ahazi nzukọ wee nyochaa ya na nnọkọ gụnyere EventMB Event Innovation Lab™. Masterclass na-ahazi mmemme mmemme, nke ezubere maka ndị ụlọ ọrụ na ndị na-ahazi ụlọ ọrụ, nyere ụzọ dị irè maka nhazi, ire ahịa na nnyefe nke mmemme. Oge mkparịta ụka ahụ ji ọmụmụ ihe na mgbanwe omume kachasị mma kesaa ọdịnaya ọhụrụ dabara na ụwa ngwakọ nke mmemme yana atụmatụ mmemme bara ụba nke teknụzụ.
Zephia Bryant, onye na-azụ ahịa anabatara sitere na Bryant Educational Leadership Group na North Carolina, kọwara ihe kpatara isiokwu ahụ ji gbasa ya, "Ọtụtụ n'ime ihe omume m agbanweela na ngwakọ, yabụ m na-eleba anya na omume kacha mma na ụzọ ọhụrụ."
IMEX America ga-emepe echi, Tuzdee Nọvemba 9, ma na-agba ruo Nọvemba 11 na Mandalay Bay, Las Vegas.
November 22, 2021 na 04: 10
Onye ọ bụla maara na ọbụbụenyi na-egosi ndụ ọbụna karịa ịhụnanya. N'otu oge n'otu oge, ị na-ahụ enyi ochie, ọ na-adịkwa gị ka ịchọgharị n'elu uzuzu uzuzu, ụlọ elu ochie na ịchọtaghachi akụ. Ụzọ ọzọ magburu onwe ya isi na-echeta bụ ịga n'ebe ndị unu na-anọkọ ọnụ n'oge gara aga.